पूर्ण जानकारी समग्र विकासको लागि आफूलाई उपयोगी र आवश्यक saturate गर्न प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू भ्रमण गर्न आवश्यक छ। एक यस्तो फोन संग्रहालय छ। सबैलाई सबै प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ जो आज संचार को माध्यम, विकास बारे आफूलाई रोचक र रोमाञ्चक ज्ञान लागि सिक्न सक्छौं।
रोचक संग्रहालय के हो
आज, यो सबै आधुनिक जीवन कल्पना गर्न गाह्रो छ, जो बिना आत्म-प्रस्ट संचार लागि उपकरणहरू रूपमा, फोन हौं। यद्यपि, यो सधैं थियो। तसर्थ, संग्रहालय हरेक आगन्तुक संचार को यस प्रकारको बारेमा जानकारी खुल्नेछ phone। आफ्नो उपस्थिति को उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त मा थियो। वर्ष द्वारा वर्ष, चमत्कार उपकरण एक दूरी सही मान्छे संग सम्पर्कमा राख्न अनुमति दिन्छ को एक विकास र सुधार भइरहेको।
पुरातन समयमा समेत मानिसहरूलाई आ यी फोन उपकरण सुरु गरेका छन् तिनीहरूले पातलो ट्यूब र यति कुराकानी जोडिएको दुई टिन डिब्बे छन्। तथापि, संचार को एक यस्तो साधन टाढाको दूरी मा व्यक्ति सुन्न अनुमति छैन। तिनीहरूले जडान पाइप को लम्बाइ बाँधिएको, र पूर्ण संभावना बहिष्कृत कि गोप्य गोप्य जानकारी व्यक्त को ठूलो स्वरमा बोल्न थियो थिए।
टेलिफोन अग्रगामी संग्रहालय आगंतुकों संचार को माध्यम को उपस्थिति र विकास को चरणमा अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छ। संग्रहालय मा प्रत्येक प्रदर्शनी, त्यहाँ थप दुई भन्दा हजार, एक अडियो सुसज्जित छ, त्यसैले तपाईंले यो प्रदर्शनीका मूल को इतिहास थाह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यो अद्भुत र विशेष संग्रहालय घरहरू आफ्नो फोन को दुर्लभ खाली ठाउँहरू, को कुलीन प्रयोग ती पनि फोन संसारभरि विभिन्न स्थानहरूमा आफ्नो ठाउँ गर्न प्रयोग बूथ छ। त्यहाँ छैन जो इतिहास र दुनिया मा प्राविधिक प्रगति को विकास को एक प्रेमी पनि एक व्यक्ति लाग्न सक्छ जो भावशून्यता छैन धेरै रोचक र असामान्य कलाकृतिहरू छ।
संग्रहालय मा तपाईं भित्री स्मरणीय र रोचक तस्वीर र यस्तो कार्यहरू लागि धक्का हल भर्नु धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। जो रहन सहज बनाउँछ, र असामान्य एकै समयमा उच्च प्रविधी संग्रहालय, शैली डिजाइन परिसर।
संग्रहालय जस्ता संस्थाहरु को घटना को इतिहास टेलिफोन इतिहास सेन्ट पीटर्सबर्ग मा
यस्तो संग्रहालय खोल्न आगन्तुक चासोको विषय भनेर यस्तो फोन फेला पार्न पहिलो हुन भएको थियो। "Mastertel" सात अधिक वर्ष अब जा, टेलिफोन इतिहास संग्रहालय को ध्यान आकर्षित जो प्रदर्शन। यो पुरानो प्रतिहरू पाउन सजिलो थिएन। नीलामी मा दुर्लभ फोन, संसारको विभिन्न भागमा संचार लागि आधुनिक स्रोतहरु, र कहिले काँही प्राप्त।
संग्रह संग्रहालय खोल्न पर्याप्त हुँदा हाँगाहरू एक मास्को मा खुलेको छ। त्यो 2010 मा भएको थियो। सेन्ट पीटर्सबर्ग मा, फोन संग्रहालय तीन वर्ष पछि, अर्थात् 2013 मा खोलिएको थियो। यो सूचनात्मक र अद्वितीय प्रदर्शनी को संस्थापक कम्पनी "Mastertel" छ, अर्थात् आफ्नो प्रतिनिधिको कलाकृतिहरू को पीछा थिए।
जो एक प्रदर्शनी यस्तो लागि अभियान लाभ हुनेछ?
सामान्यतया, फोन संग्रहालय, र यात्राको अपवाद बिना प्रदर्शनियों, यात्राहरु, सबै उपयोगी गर्न। तर विशेष गरी जीवन को पाठ्यक्रम मा संचार को लागि उपकरणों, प्रदर्शनी मा प्रस्तुत संग वास्तविकता मा भेट गर्ने मान्छे को एक यस्तो संस्था आकर्षित।
बच्चाहरु, विकास चरण, कुनै पनि नयाँ उपयोगी जानकारी मा जो। विशेष गरी अभियान crumbs फोनको संग्रहालय देखाउनुहुन्छ भन्ने प्रदर्शनी व्याख्या गर्न अघि भने, आधुनिक ग्याजेटहरू समय देखा छन्। आखिर, लगभग सबै बच्चाहरु तिनीहरूलाई समय बिताउन मन पर्छ।
मानवता को सुन्दर आधा प्रतिनिधिको समय को डिजाइन समाधान डिजाइन संचार उपकरण विचार रोचक हुनेछ। मनोरम, विशेष सजावटी तत्व र सामान संग, टेलीफोन निश्चित प्रसन्न हुनेछ।
मानिसहरू फोन को मुद्दा को प्राविधिक पक्ष रुचि हुनेछ।
यसैले यो संग्रहालय सबैलाई रोचक हुनेछ स्पष्ट छ। संस्थाहरू मा अनुकूल कर्मचारी सबै सुविधाहरू र प्रदर्शन प्रत्येक विकास चरणमा पाहुनाहरूसँग चिनाउने विस्तार समूह, व्यक्तिगत वा सामूहिक यात्राको सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ।
के संग्रहालय गएर आफूलाई लागि सिकेका गर्न सकिन्छ
आफूलाई लागि हरेक मानिस आफ्नै टेलिफोन को केहि प्रदर्शनी गएर पछि फेला पार्न। कसैले रचनात्मकता लागि विचार प्राप्त गर्न सक्छन्, अरूलाई गर्दा अरूलाई बस परिवार र साथीहरूसँग उहाँले देखेका थिए के एक आकर्षक र रोचक कुराकानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, समान rarity छन् कि हैंडसेट किन्न चाहनु हुनेछ।
Emo subculture र अन्य युवा आन्दोलनहरु
सबैभन्दा सुन्दर उज़्बेक। उज़्बेक केटी
नाइजेरिया को हुन्? अर्थ र व्याख्या विकल्पहरू।
संसारमा सानो कुरा। मूर्तिहरु Willard Wigan। सानो बन्दूक
यसो को मूल्य "कसले भनेर शैम्पेन पिउन छैन, जोखिम छैन"
खुट्टा, शरीर, अनुहारमा छातीको छाला
सपना व्याख्या: के एक हीरा सपना?
सुशी पट्टी "टाउन", Naberezhnye Chelny: समीक्षा
के होंठ बनाउँछ? कसरी घर मा चम्कने बनाउने?